Clem anotiudza nezvaSylvia, ramangwana Linux Mint 18.3 | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Linux Mint maneja weprojekiti munguva pfupi yapfuura yakaburitsa chinyorwa nezve iyo projekiti nhau uye zvinyorwa zvemwedzi waGunyana. Iye zvakare achangobva kuburitsa chinhu chimwe chete chemwedzi waNyamavhuvhu, asi panguva ino haana kungotaura nezvemari uye izvo zvitsva zveLinux Mint 18.3 asi zvakare yasimbisa zita remadunhurirwa reiyi vhezheni, zita remadunhurirwa rinotanga nevara S uye rinoenderana naSylvia.
Asi, zvakakosha kupfuura Zita raSylvia es runyorwa rwemashoko iyo Clem Lefebvre yakaratidza maererano neiyo yemberi vhezheni yeLinux Mint, vhezheni yakatakurwa nenhau.
Sylvia richava iro zita rechikadzi reLinux Mint 18.3
Kana isu takambotaura kuti Linux Mint 18.3 yaizotsvaga nyore mukushandisa kwayo; ikozvino Clem anotiudza kuti mabasa haazorasike, nekuti mune Mint Backup, iwo akarasika mabasa ichagoverwa neTimeshift, kushandiswa kwe kudzoreredza uko kunounza iyo nyowani Linux Mint 18.3. MintReport ichave chimwe chishandiso chitsva icho chinozoverengerwa mukugovera. Ichi chishandiso chinotarisira tumira mishumo yetupukanana nezvinetso zvinoonekwa mukugovera. MintReport inoshandisa iyo Ubuntu yekubika system kuvaka pamusoro uye kubatsira mukuvandudza kwemangwana shanduro dzeLinux Mint.
Ose maviri Mint Backup uye MintReport uye Timeshift ichagadziriswa yakakwirira resolution skrini, kumisikidzwa kunozove kuri kwekutadza mune ramangwana kuiswa kwekuparadzira. Ichi chitsva chinotsigirwa neCinnamon 3.6, inotevera vhezheni yedesktop yako. Iri desktop richaunza akawanda matsva maficha akapihwa nema plugins uye mawedzero-atinowana mairi Sinamoni zvinonhuwira uye izvo zvichabatanidzwa sehwaro mune inotevera vhezheni. Saka zvinoita seLinux Mint 18.3 Sylvia ichave yakanyatsogadziriswa kune unovice mushandisi, asi Ko Linux Mint mushandisi achazvida here? Iko kushandiswa kutsva kwekushandisa kunoshanda here? Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Clem inotaura nezve Sylvia, ramangwana Linux Mint 18.3
Ndatenda zvikuru, Makorokoto akaisvonaka.
Kwaziso kubva venezuela